မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ဗဟုသုအဖြစ်ရော ပညာရှာလိုသုများအတွက်လေ့လာသင့်တဲ့စာအုပ်ကောင်း
ဘာလို့ အခုလိုပြောရလဲ ဆိုတော့ ဒီစာအုပ်က ဘာသာလေးခုကို တစ်ထိုင်ထဲ
လေ့လာလို့ရတဲ့အတွက်ပါ ကိုယ့်ဘာသာမဟုတ်ပေမယ့်လည်း လေ့လာထား
သင့်ပါတယ် ဒါမှ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် တွေကို ကြိုတင်သိရှိပြီး လူမှုဆက်ဆံရေး
နယ်ပယ်မှာ ကျင်လည်စွာ လှုပ်ရှား ရုံးကန်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဘာသာတစ်ခုရဲ့
အလေ့အထလေးတွေ သိထားမှ ကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ် မလေးရှားလာမှ
မွတ်စလင်ဘာသာကို ဒီစာအုပ်ဖတ် ပြီး အသေချာလေ့လာဖြစ်တယ် ဘာသာ
တရားရဲ့ သမိုင်းကြောင်း ကိုလည်းသိတယ် ခရာစ်ယာန် သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတော့
လည်း ဆွေးနွေး ပြောဆိုနိုင်မယ် ဟိန္ဒူဘာသာလည်း လေ့လာဖြစ်တယ် ယုံတာ
မယုံတာ လက်ခံတာလက်မခံတာက သဘောထားကွဲလွဲခွင့်ရှိပါတယ် အလုပ်မှာ
က နီမောကူးမား(ဟိန္ဒူ) စောအယ်စာထူး(ခရာစ်ယာန်) ချာဟီဒန်က မွတ်စလင်
အမောင်က ဗုဒ္ဓဘာသာ အားလုံးနဲ့ သင့်တင်မျှတအောင်ပေါင်းတယ် လူတိုင်းမှာ
လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိသလို အဆင်ပြေသလို သဘောထားကွဲနိုင်ပါတယ်
ကမ္ဘာ မှာ ပညာတတ်တွေ ပညာရှင်တွေ အဆိုးအကောင်း အကျိုးအကြောင်းကို
ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ လူတော်တွေ အများကြီးပဲ အားလုံး အဆင်ပြေ ယုံကြည်
ရာကိုးကွယ်ကြတာမလို့မဝေဖန်တတ်ပါဘူး လေ့လာရုံ သိထားရုံပဲ ဒီစာအုပ်ကို
ဖတ်ရှု ဖြစ်ပါတယ် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က တောင်းဆိုတာနဲ့အမှတ်တရ
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်What is Buddha? ကို သူဌေးက မေးလာတာနဲ့ ဒီစာအုပ်
ကိုလမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ် တောင်းတာကြာပါပြီ 2လပိုင်း တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအမှီ
တင်ပေးပါတဲ့ ဒေါင်းလို့ မရတဲ့ သူများက မေးနဲ့ တောင်းနိုင်ပါတယ် မေးထဲကနေ
ပို့ ပေးပီးသားဆိုတော့ လူအများကြီးကို အလွယ်တကူ ပြန်ပို့ လို့ လွယ်ပါတယ်
ကိုယ်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာပြောတာ သူ့ လိုအမေးခံရရင် ဘယ်လိုရှင်းပြမလဲနော
လေ့လာဖတ်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေအရ မှိသလောက်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ် လူတိုင်း
မှာ ကံ ဆိုတာရှိတယ် ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာဖြစ်မယ် မကောင်းတာ
လုပ်ရင် မကောင်းတာဖြစ်မယ်ပေါ့ မကောင်းတာလုပ်နေလည်း ခုဘ၀မှာ ချမ်း
သာနေတာ အများကြီးတဲ့ .... အဲ့ဆိုလည်း ရှေ့ ဘ၀ နောက်ဘ၀တွေ ရှိတယ်
နောက်ဘ၀ခံရမှာ ပဲလေ ခရာစ်ယာန်က နောက်ဘ၀မရှိဘူး သေပီးရင် ပြန်
လည်ရှင်သန်ထမြောက်ရမှာပဲ ဘုရားသခင်က ကယ်မှာ ဟိန္ဒူက လည်း ရာမ
ခရစ်ရှနားကပြောထားတယ် ဘာညာနဲ့လာတာ.....။ကဲကွာ.. ကြာသလားလို့ 
ဘုရားက ဘယ်ဆီမသိဘူး လူချင်းချမလား ဟေ့ကောင်ဘာညာပြန်ရှဲတာပေါ့
ဟုတ်ဘူးလား ရှင်းမှမတတ်တော့တာ ဒီနည်းပဲရှိတာ ခုဒီစာအုပ်လေးကတော့
(1)What is buddha?
(2)What is islam?
(3)What is Christain ?
(4)What is Hindi?
စာအုပ်ကို ဒီမှာသွား ယူပါ ဘာသာကြီးလေးခု အနှစ်သာရများ (ညိုသောင်း)
Author Anonymous at 6:14:00 PM
ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာဖြစ်မယ် မကောင်းတာ
နာချင်လို့မုန်လာထုတ်မ ထုလိုက်လို့ ပုသွားမယ်
ငါတော့ အဲ့လိုပဲယုံကြည်လေ လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲပါဆိုမှ
အင်း တော်တော် တန်ဖိုးရှိတဲ့စာအုပ်ပဲ... ဖတ်ချင်တယ် ဒါပေမယ့် အဲ့လိုကြီး မဖတ်တတ်ဘူး.. စာအုပ်နဲ့ဖတ်ချင်တယ် :(
ဒေါင်းလို့ မရဖြစ်နေတယ်းးးး(((
လင့်ပြန်ပြင်လိုက်ပါပြီ မချိုချိုရေ..အဆင်မပြေရင် မေးက ပို့ ပေးမယ်နော် မေးလိပ်စာသာ ထားခဲ့ပါ
ဒါလေးလဲ ပါတယ် အကိုေ၇ မေးထဲကို ကျေးဇူးပြုပြီး
ဟီးးးနှစ်အုပ်ပဲ တောင်း၇သေးပါတယ် အကို